Yakanakisa Kurapa CE yakanakisa laser bvudzi kubvisa mudziyo / shr diode laser bvudzi kubvisa Mugadziri uye Fekitori | KES
Medical CE yakanakisa laser bvudzi kubvisa mudziyo / shr diode laser bvudzi kubviswa
Diode Inotakurika Laser Bvudzi Kubvisa Machine, Diode Laser System Machine ChiGerman Laser Emitter Wavelength 808nm
bvudzi laser kubviswa, diode laser bvudzi kubvisa michina
Iyo sisitimu inoshandisa yakanakisa bvudzi kubvisa wavelength ye808nm diode yekudzika kupinda mukati memukati mune iro bvudzi follicle riripo. Mukurapa maitiro, akateedzana ekushomeka kushoma, kudzokorodza kudzora kunowedzera tembiricha yeese follicle yebvudzi uye yakapoteredzwa, inovaka nyama kune 45 degree Celsius. Uku kunowedzera kupisa zvishoma nezvishoma kunoshandisa ma chromophores kupinda munyama dzakakomberedza kunge matura ekunyatsopisa bvudzi rebvudzi. Izvi, pamwe chete nesimba rekupisa rakabatwa rakanangana nemusoro webvudzi, zvinokuvadza follicle uye zvinodzivirira kukura zvakare. 808nm diode laser muchina inonyanya kushanda kune bvudzi follicle melanocytes pasina kukuvara kwakatenderedza nyama. Iyo laser mwenje inogona kutorwa nebvudzi shaft uye bvudzi follicles mu melanin, uye ndokushandurwa kuita kupisa, nokudaro ichiwedzera tembiricha yebvudzi. Kana tembiricha ikakwira zvakaringana zvekuti isinga gadzirisike chimiro chebvudzi follicle, iyo inonyangarika mushure menguva yechisikigo maficha ehutano hwebvudzi uye zvobva zvazadzisa chinangwa chekubvisa bvudzi zvachose.
Muenzaniso NO. MED-808m
Laser Rudzi Yakakwira Simba Dhiodhi / Laser Bvudzi Kubvisa Machine Mutengo
Wavelength 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri-wavelength inosarudzwaChangeable Spot saizi 9 * 9, 12 * 12, 12 * 18 inosarudzika
Saizi Kukura 12 * 12mm²
Kudzokorora Rate kusvika 10HZ
Pulse Upamhi 10-400ms
Simba repamusoro 2500W
Chipuratifomu Kufananidza 100-240VAC 12A MAX / 50-60HZ
Net Kurema 27KG
Divi 397mm * 357mm * 463mm
Kushanda ye808nm kubviswa kwebvudzi alma lasers diode laser: Yakachengeteka bvudzi kubviswa pane ese marudzi eganda; hapana marwadzo, anonyatso gadzikana panguva yekurapwa; Inokodzera chero bvudzi risingadiwe munzvimbo dzakaita sekumeso, maoko, hapwa, chifuva, musana, bikini, makumbo… zvakare ine ganda rinomutsiridza uye ganda rinosunga panguva imwe chete.
1) Kuderedza Bvudzi Kusingagumi pane ese ane vhudzi ane mavara uye ese marudzi eganda - kusanganisira ganda rakasvinwa.
2) Kusina Marwadzo, Bvudzi-Mahara - Inonyaradza Kubvisa Bvudzi
1. Rapa mhando dzese dzeganda dzinosanganisira ganda rakacheneswa.
2. Big saizi saizi, yakachengeteka uye nekukurumidza kurapwa.
3. ChiGerman **** III laser emitter, hupenyu hwakareba, kugadzikana kuita; Sapphire kristaro, kuonana nekutonhora, kunorwadza chaizvo.
4. Inokodzera mhando dzese dzevhudzi, inowanzoonekwa se "Goridhe Goridhe" yekubvisa bvudzi: zvachose kubviswa kwebvudzi
5. Ndicho chigadzirwa chakakurudzirwa nesangano rezvehutano reAS, uye isu tiri vatengesi vepamutemo vezvipatara zvakawanda nemakiriniki epamba.
6. Sapphire semiconductor yekubata pamusoro pekunze system
7. Professional uye Akangwara mashandiro system, parameter inogona kuchengetwa
Asati & Mushure
Pasuru Yakajairika Ndege Nyaya
Dhirivhari Mukati memazuva 3-4 Ekushanda
Kutumirwa Pamusuwo (DHL / TNT / UPS / FEDEX…), Nemhepo, Negungwa
Yedu Services / garandi
Seunyanzvi hwekugadzira, isu tinopa anotevera masevhisi:
1.Mutengo wakaderera wemuenzaniso diode laser yekubvisa bvudzi muchina, Makwikwi emitengo yevagovera
2. GORE rimwe garandi uye nguva yehupenyu yekuchengetedza
3. Munguva yekuendesa.
4. Yepamusoro mhando vimbiso ..
Kutamisa Bhangi, Western Union.
Chii diode laser kubviswa bvudzi kurapwa?A Laser Bvudzi Kubvisa Machine Mutengo unoshandisa semiconductor tekinoroji iyo inogadzira inoenderana kuratidzira kwechiedza mune inoonekwa kune infrared renji. Aya maitiro akasarudzika anoita kuti diode laser ive tekinoroji yakakodzera kwazvo yekubvisa bvudzi laser, zvichigonesa kurapwa kwakachengeteka uye kunoshanda kwemarudzi ese eganda nemhando dzebvudzi, munzvimbo dzese dzemuviri.
Iyo laser mwenje inokonzeresa kukuvara kusingaperi kune iyo bvudzi follicles uyezve inoremadza ayo maitiro ekukura. Mune diode laser yekubvisa bvudzi kurapwa, iyo laser mwenje inongokanganisa inoshingaira kukura bvudzi. Izvo zvinowanzo fungidzirwa kuti laser vhudzi kubviswa kunotungamira kune zvachose kubviswa kwebvudzi.
Ndezvipi zvimwe zvandinofanira kuita kana ndikaenda kunorapwa laser?
Dzivisa kusvibiswa nezuva / kusunanzva kwemazuva anotevera 7-10.
Pashure: Mushonga CE wekubvisa bvudzi muchina wevakadzi / wechigarire bvudzi kubvisa muchina wemurume
Zvadaro: Medical CE tenga bvudzi kubvisa laser muchina / yakanakisa nyanzvi laser bvudzi kubvisa muchina
Laser bvudzi kubvisa muchina
CE 808nm Diode Laser Permanent Bvudzi Kubvisa
808nm Diode Laser Permanent Bvudzi Kubvisa TUV ce ...
Medical CE bvudzi kubvisa laser yerima ganda / sal ...
TUV inokurumidza Diode laser bvudzi kubvisa muchina
Kurapa CE vakadzi vakadzi vhudzi kubvisa bvudzi / diode 80 ...